Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Fooda Isugalisay Qoomiyadaha Herarida & Oromada.
Kooxda TPLF oo Fooda Isugalisay Qoomiyadaha Herarida & Oromada.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Herar ee dhulka Herarida ayaa sheegaya in shalay iyo xalay ay magaalada kataagnayd xiisad xun oo udhaxaysa dadka shacabka ah ee magaalada iyo deegaanada udhaw kudhaqan.
Xiisadan oo hada meel xun maraysa ayaa lasheegayaa in ay udhaxayso dadka Herarida ah ee kudhaqan magaalada Herar iyo dadka udhashay qoomiyada Oromada ee kudhaqan magaalada Herar iyo deegaanada kuxeeran.
Xiisada kataagan magaalada Herar oo gacan kahadal gaadhay ayaa lasheegayaa in ay kadambaysay qoomiyada Tigreegu, waxaana lasoo warinayaa in saraakiisha Tigreegu ay dhaqaale badan kubixiyeen sidii uu dagaal lagu hoobto udhex mari lahaa labada qoomiyadood ee Oromada iyo Herarida.
Saraakiisha kooxda TPLF ee aagaas ayaa si ay dadka isugu diraan bilaabay in ay maamulka magaalada kudaraan dad aan udhalanin qoomiyada Herarida ee magaalada dagta, waxaana talaabadaas siwayn uga cadhooday dadka Herarida oo banaan baxyo waawayn isugu soobaxay, sidoo kale dadka Herarida ayaa bilaabay qorshe kadhan ah saraakiisha TPLF ee magaalada Herar gumaysata.
Kooxda TPLF ayaa sanadihii lasoo dhaafay mashquul ku ahayd sidii ay fooda isugu galin lahaayeen qoomiyadaha oodwadaagta ah ee ay gumaystaan, waxayna kuguulaysteen in badan oo kamid ah dire diraanimadoodii.